RECIPE EE KAABAJKA DEGDEGA AH EE LA KARIYEY EE MAALIN KASTA, OO AY KU JIRAAN MACAAN: NOOCA KHUDAARTA SI AY U DOORTAAN, SIDA LOO SAMEEYO TALLAABO TALLAABO TALLAABO AH? - BEER CAGAARAN
Waxaan samaynaynaa kaabajka degdega ah ee dheriga maalintii: noocyo kala duwan oo cunto karis ah
In Russia, kaabash muddo dheer waxaa laguula dhaqmaa jacayl iyo ixtiraam. Kaabashka waa ku fiican yahay waxqabad kasta, laakiin kaabajka lakala qaado, dabcan, waa ka baxsan yahay tartanka. Her - qumman iyo qajaar ama jilicsan iyo casiir leh - sida wax kasta oo ku dhow.
Kaabashka la kariyey waa mid ka mid ah suxuunta ugu jecel ee dhinacyada oo dhan, sababtoo ah waxay ku xirantahay kaluun iyo hilib.
Sidoo kale, diyaarinta kaabash pickled waa nidaam cadaalad ah oo aan u baahnayn xirfado gaar ah. In maqaalka aad ka heli doontaa midhooto ah ee kaabajka degdeg ah ee weel, oo ay ku jiraan macaan.
Waa kuwee qudaarta si ay u doortaan?
Labada nooc ee kaabajka ah iyo kaabajka cas ee Kaabashka waxay ku habboon yihiin marinating, laakiin badiba waxay doorbidaan marka hore.
Kaabashka cad wuxuu ka jilicsan yahay oo ka jilicsan yahay kaabajka guduudan. Laakiin marka dambe, haddii si habboon loo daboolo, inta lagu guda jiro cuntooyinka iyo qiyaasaha si taxadar leh loo arkay, waxay noqon kartaa saxan miiska.
Si habsami ah Si aad u doorato kaabajka loo yaqaan pickling, waxaad u baahan tahay inaad raacdo algorithm:
Iska yaree kaabajka laba qaybood.
Qiyaas cutubka: ka gudaha waa in uu ahaadaa caddaan leh shukumaan, iyo madaxa waa inuu si dhexdhexaad ah u xiran yahay.
Dhadhanka khudradda waa inuu ahaadaa mid macaan iyo ugu muhiimsan - qajaar.
Waxaad soo saari kartaa noocyada soo socda ee kaabajka:
Late. Noocyadaas ayaa badanaa loo isticmaalaa, sababtoo ah dhadhanka qudaarta inta lagu jiro kaydinta muddada-dheer waa la hagaajiyay. Kuwaas waxaa ka mid ah:
"Amager" iyo kuwo kale.
Xilliga bartamaha. Faa'iidada noocyada noocan ahi waa hore u kobcin: bisha Agoosto ama Sebtembar. Sidoo kale, dhalashada iyo nolosha shelf ee noocyada hore u badan oo ka badan kuwa kale. Noocyo kaabajka xilliga dhexdhexaadka ah:
"Jubilee F1" iyo kuwo kale.
Hybrid. Noocadani kuma raaxaysato guusha noocan oo kale ah, sida dhexdhexaad ama xilli dambe, sababtoo ah beerashadooda waxaa badanaa loogu talagalay xajmiga madaxa, mana aha dhadhanka. Intaa waxaa dheer, noloshooda shafka ah uma oggolaan doonto inay ku haystaan ​​illaa xilliga beerashada cusub. Noocyada ugu caansan ee loo qaado:
"Menza" iyo kuwo kale.
Digniin! Fasalka "Krümon" laguma talinayo in la qaado, sababtoo ah Waxay leedahay qaab aad u cufan.
Kaabashka waa il heer sare ah oo ah iodine, fosfooraska, birta, magnesium iyo walxo kale oo badan oo ku habboon jirka. Cuntadani, thanks to ilaalinta, xitaa ka dib markii pickling, dhammaan fitamiinada ku jira khudradda ceeriin, ka caawisaa xoojinta nidaamka difaaca, ka fogaanshaha vitamin yaraanta, hagaajin iyo horumarinta microflora mindhicirka.
Sidoo kale Marka marinating, kaabash ilaaliyaa fitamiin C iyo U. Marka hore waxay jidhka ka caawisaa inay iska caabiyaan bakteeriyada keena caabuqyo kala duwan, iyo tan labaadna waxaa lagula talinayaa cudurada kala duwan ee caloosha iyo mindhicirta mindhicirka: colitis-ka, ultrasoundka iyo cudurada duodenal ah. Sidoo kale waxay hoos u dhigtaa kolestaroolka.
Isticmaalka waxaa lagula talinayaa cudurada kelyaha, turjubaanka iyo cudurada wadnaha. Kaabashka caleenta waa mid gaar ah oo ah badeecad cunto, sababtoo ah qiyaasta caloric celcelis ahaan waa 47 kcal halkii 100 g, oo ah borotiinka - 0,8 g, dufanka - 0.05 g, karbohidrates - 11.5 g.
Tilaabooyinka Toosinta Tilmaamaha
Halkan waa Cuntada caadiga ah ee kaabajka maalinlaha ee marinade. Waxyaabaha ay ka kooban yihiin:
Kaabashka - 2 kg.
Karootada - 1 pc.
Garlic - 3 xabbo. toon.
Biyaha -1 l.
Sisin - 1-2 tsp
Sonkor - 1-2 tbsp. l
Baay cagaarsho - 5 pc.
Digir madow oo basbaas - 9-10 pcs.
Tallaabo tallaabo tallaabo ah:
Kaabashka jarjarro dhexdhexaad ah si aad u eegto quruxda saxanka markaad u adeegeyso.
Karootada xawaashka ah ee huurka, aan sidoo kale la gooyaa wareegyada khafiif ah.
Ku buuxi dheriga khudradda: dhoobo, basbaaska iyo qaxwaana caleemaha saaran, ka dib marka kaabajka iyo dabacasaha dillaacay.
Diyaarso marinnada: ku dar milix, sonkor ilaa biyaha, ka dibna dabka ku shub, sug in aad karisid oo isku kari ilaa 10 daqiiqo.
Shub marinade ee baaquli iyo ugu dambeyntii ugu dambeyntii ku dar khal, dabooli iyo meel ka hoos saxaafadda maalin.
Waa muhiim! Kaabashka waa inuu noqdaa mid ceejiya, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho kaabajka dhexdhexaadka ah.
Noocyada kala duwan ee la karinayo
Kaabashka macaan ee macaan. Xulashada karintaani way ka duwan tahay marka marka qaadista ay kordhiso qadarka sonkorta iyo khal, taas oo ku jirta qariidada caadiga ah. Beddelka 1 tsp ee ku jira 100 buug oo khal., Iyo sonkorta waa 100 garaam.
Kaabashka digriiga ah ee weelka. Iyadoo diyaargarowga, ma jiraan farqi ah ee cunto-kariska iyo amarka karinta, waxay ku jiraan kaliya waxa saxda ah ee kaabash marinates. Xaaladdan oo kale, dhammaan khudradda la gooyey waxaa lagu dhejiyaa weel saddex-litir ah lakabyada: 1 - dabacasaha iyo toon, 2 - kaabaje, 3 - basbaas. Marinade iyo geed isbonji la shubay. Xayawaanku waa xiran yahay dabool caag ah, waana in lagu hayaa qol diiran.
Kaabashka lagu daro toonta. Xaaladdan oo kale, maaddooyinka sidoo kale ma beddelaan, oo kaliya caddadka Toonta: halkii 3 toon oo toon ah, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho madaxa oo dhan.
Maraq la daboolay basbaaska. Basbaas macaan ayaa lagu daraa qashinka caadiga ah: 2 pc. 1 kg. kaabajka.
Kaabashka hilibka lagu dubay ee khudaarta. Markaad marinayso kaabajka, waxaad ku dari kartaa khudaar kasta: xididdo, noocyo kala duwan oo basbaas ah, toon, karootada, basasha, xitaa geedka sida ginger ama miro - tufaax!
Ku daridda maaddooyinka qaarkood waxay ku xiran tahay kaliya dhadhanka martida, sidaa darteed ma jiraan xaddi go'an oo mid ama mid kale oo khudradda ah, oo dhir udgoon, oo aad ku dari doonto saxankaaga. Tusaale ahaan, kordhinta qiyaasta basbaaska, waxaad ka dhigi kartaa saxanka sharoobada ah, basasha - si aad u bixiso dhadhan qafiif ah oo fudud, aan ku habooneyn qaacidada caadiga ah.
Fursadaha loo adeego suxuunta
Kaabashka caleenta ah waa dhammaystirnaanta ugu fiican ee gabi ahaanba wax soo saarka: kalluunka, hilibka, baradhada, bariiska iwm. Waxaad u adeegi kartaa cunto karis ama salad, iyadoo waxoogaa yar lagu waraabiyo gabbaldayaha ama saliida sayladeed iyo ku dar fara-saar.
On our site waxaad ka heli kartaa hababka kale oo degdeg ah-karinta ee kaabajka casriga ah iyo wax ka bartaan faa'iidooyinka iyo waxyeelada ee sheyga:
cunto fudud oo dhadhan badan leh;
khudaarta la kariyey 2 saacadood;
fudud oo macaan leh oo khudradeed leh khal;
marinade ee bangiga: cuntooyinka la xaqiijiyay.
Qiyaastii qof kastaa wuu jecel yahay saxan, sababtoo ah waa in la beddelaa qashinka si waafaqsan gabi ahaanba doorashooyinka, iyada oo aanad waqti badan ku qaadan karin cunto karinta ama leh heer sare oo xirfad cunno leh!